मृ’त्यु भएकाहरुको छोरी बन्दै सपना१८ वर्षीया सपना रोका मगर पनि मृत शरीरलाई दागबत्ती दिन्छिन् (भिडियो सहित) – Khabar PatrikaNp
September 25, 2020 459
घर छाडेपछि उन’को दैनिकी र साथी संगत दुबै फेरियो। जोकोहीसँग पनि एकदमै छिटो घुलमिल हुन सक्ने र अरुको दुख देख्न नसक्ने उनकाे बानी थियो।साथीहरुले दुःखसुख पोख्थे, उ’नले सकेको सहयोग गर्थिन्। तीनै साथीह’रुको संगतले उनले बाटो बिराइन्। थप भिडियो हेर्नुहोस्:
Prevगगन थापाको प्रश्न: ‘बिजुली गए फोन गर्नू’ भने चोरी भए गृहमन्त्रीलाई फोन गर्ने?
Next‘जनता हाम्रा ग्राहक हुन्, ग्राहकका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्नुस्’ : मन्त्री पुन
जीवनलाई कसरी सफल बनाउने भनेर दशवटा सुत्रहरु,कहिले असफल हुनु पर्दैन !
कोरोना संक्रमण भए पहिले यी लक्षणहरु देखा पर्न सक्छन्
माता मनोकामना माइले हामी सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, भाद्र २० गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल